Ndị mba ọzọ nwere ọgwụ mgbochi nwere ike ịga Sydney site na Nọvemba 1
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Ndị mba ọzọ nwere ọgwụ mgbochi nwere ike ịga Sydney site na Nọvemba 1
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi ala New South Wales (NSW) Dominic Perrottet
New South Wales Premier kwuru na oge eruola imepe iji nyere aka tụgharịa akụ na ụba, nke mkpọchi COVID-19 nke steeti dị nso ọnwa anọ mebiri.
Ọstrelia mechiri ókè ya na Machị 2020 n'ihi ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ.
Na New South Wales, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi ruru 77.8%, ebe 91.4% anatala opekata mpe otu ọgwụ mgbochi COVID-19.
Ọnọdụ akụ na ụba New South Wales emebiwo nke ukwuu site na mkpọchi COVID-19 nke ọnwa anọ ya.
Onye isi ala New South Wales (NSW) Dominic Perrottet kwupụtara taa na Sydney ga -emeghe ka ndị ọbịa si mba ofesi gbaa ọgwụ mgbochi ọ bụla, na -enweghị mkpa iche, malite na Nọvemba 1, 2021.
“Anyị kwesịrị ịlaghachi ụwa. Anyị enweghị ike ibi ebe a na alaeze hermit. Anyị ga -emepe, ”onye ndu steeti kachasị ọnụ na Australia kwuru na Fraịde.
Ọstrelia mechiri ókè ya na Machị 2020 n'ihi ọrịa na-efe efe nke COVID-19, na-enye ohere ịbanye naanị ụmụ amaala na ndị na-adịgide adịgide bụ ndị a ga-enwerịrị ikike ịpụ iche n'ụlọ ezumike izu abụọ n'iji aka ha.
Prime Minista Australia Scott Morrison kwuru na mbido ọnwa a, njem mba ofesi ga -alaghachi ozugbo 80% nke ndị mmadụ n'otu steeti gbara ọgwụ mgbochi ọ bụla, mana ọ ga -adị na mbụ maka ndị Australia na ọ ga -achọkwa ichepụ ụlọ.
Na New South Wales, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi eruola 77.8%, ebe 91.4% anatala opekata mpe otu ọgwụ mgbochi COVID-19.
Agbanyeghị, NSW Premier kwuru na oge eruola imepe iji nyere aka tụgharịa akụ na ụba, nke mkpọchi COVID-19 nke steeti dị nso ọnwa anọ mebiri.
Perrottet kwuru, "ichekwa ụlọ nkwari akụ, ịpụ iche n'ụlọ bụ ihe mgbe ochie, anyị na -emepe ụwa Sydney na New South Wales."
Dabere na Perrottet, ndị na -abata Sydney ga-ebu ụzọ gosipụta ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na ule COVID-19 na-adịghị mma tupu ịbanye ụgbọ elu na Australia.
Iwepụ ihe ndị dịpụrụ adịpụ ga -enyere njem mba ofesi na Australia aka na ọ ga -anabatakwa puku kwuru puku ndị Australia tọrọ atọ na mba ofesi n'ihi amụma a. Enweela oke ọnụ na ọnụ ọgụgụ ebe ndị njem na -alọta na kwarantaini ụlọ dị.
Ka ọ dịgodị, na Medicallọ Ọgwụ na Ahụike Australia, nke na -anọchite anya ndị dọkịta nke mba ahụ, na Fraịde dọrọ aka na ntị na ngosipụta ya gosipụtara na usoro ahụike obodo agaghị enwe ike ịnagide nubata nke ndị ọrịa coronavirus mgbe obodo emepegharịrị.
WTN nwere ajụjụ nchekwa ọhụrụ maka ahịa njem ụwa ...
Ogige ntụrụndụ Sandals® gụnyere Resorts Sweeps Caribbean ...
NchNhr ụgbọ elu ọhụrụ nke Uganda: Ahịhịa?
Nwoke na-anwa ịgbanye ọkụ n'ụgbọ okporo ígwè dị elu nke Japan
Iwu ọhụrụ na-akpọ oku maka ọgbakọ White House na...
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica kpọrọ onye nnọchi anya GITT ọhụrụ
Ndị America echeghị na ọrịa kacha njọ…
Ụgbọ elu ọhụrụ si Bangkok gaa Phnom Penh na Bangkok...
Obodo kacha mma n'ụwa taa
Na-agwa mkpa dị na ụwa ọhụrụ njem
Seychelles abụghị obodo nchegbu ugbu a maka Australia ...
Onye na -eto eto ugbu a na -alụ ọgụ maka nsogbu ihu igwe na Milan
Achụpụrụ n'agwaetiti Vulcano nke Italy n'ihi ihe na-egbu egbu…
Onye nchoputa Pizza nke Papa John enweghị obi ụtọ maka mweghachi
Turkey yiri egwu ịchụpụ ndị nnọchi anya US na 9 ndị ọzọ
Ihe ngosi OTDYKH na Russia nwere ihe ịga nke ọma
India Forum Focus na ịtụte aku na uba: Reimagine ...
Ọrụ dịpụrụ adịpụ maka ụmụ akwụkwọ na 2022
Ahịa ụlọ amamịghe zuru ụwa ọnụ ga -eto ruo ijeri $ 137.9 na ...
Expo 2020: ụgbọ elu Emirates gaa Seychelles
Otu esi eme njem na COVID Strain Omicron ọhụrụ?
Ihe ịchọ mma okomoko ọhụrụ na Watch Brand SABOTEUR na-ebido
Ọrụ ụgbọ elu Etiopia dị mma na Edge?
Isii n'ime obodo iri kacha mma n'ụwa ịkwaga...
ITA Airways webatara iwu maka ụgbọ elu Airbus 28 ọhụrụ
Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na-ebuga 87 ọhụrụ biometric-enyere aka…
Jamaica Blitz na ahịa zuru ụwa ọnụ: mmelite gọọmentị sitere na…
A kwadoro ọgwụ mgbochi Russia Sputnik V ugbu a maka ntinye Israel
Ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya ga-ekwu okwu na Africa...
Kedu ihe ọhụrụ na Bahamas na Nọvemba
Ememe n'ụsọ osimiri bụ nhọrọ kacha amasị ndị Britain
Ndị mmekọ Italiantali na-enweta ozi njem ọhụrụ site na Seychelles
Ụgbọ elu ọhụrụ si Miami gaa Chetumal na ụgbọ elu America December 3, 2021
Ụzọ ọhụrụ ahụ nwere ugboro abụọ kwa izu na Wednesday na Saturday na ụgbọ elu Embraer 175, nke nwere ikike maka ndị njem 76: oche 64 na nnukwu ụlọ na oche 12 na klas azụmahịa.